“အရင်ကမကောင်းခဲ့တာတွေကို မေ့ပစ်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်” > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် / “အရင်ကမကောင်းခဲ့တာတွေကို မေ့ပစ်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်”
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ October 2, 2016 မေးမြန်းချက် Leaveacomment 576 Views
ရေးသားသူ: ပိုင်နွန်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည်။
မေး။ ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဒီကမောင်လေးကိုယ်တိုင်ပဲ မိတ်ဆက်ပေးပါလား?
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ကျွန်တော့်နာမည်က မောင်—–ပါ၊ ဇာတိကတော့ မုဒုံမြို့ကပါ။ အသက်က (၂၁) နှစ်ရှိပြီ၊ ကျွန်တော်က မွန်လူမျိုးပါ၊ ဒါပေမဲ့ မွန်စကားတော့ ကောင်းကောင်း မပြောတတ်ဘူး၊ ကျွန်တော့် အစ်မ တော့ ပြောတတ်တယ်၊ အဖေတို့ အမေတို့က မွန်ပဲ။
မေး။ ။ မိဘတွေကရော ဘာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါသလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော့်အဖေက ဆိုင်ကယ်အရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်၊ အမေက ကျောင်းဆရာမပါ။
မေး။ ။ အခုမောင်လေးရဲ့အသက်က (၂၁) နှစ်ရှိပြီးဆိုတော့ မူးယစ်ဆေးကို ဘယ်အချိန်လောက်က စသုံးခဲ့ပါ သလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်ကျောင်းနေအရွယ် အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝက စသုံးခဲ့တယ်။ အထက်တန်း ကျောင်းဆိုတာက (၉) တန်းစာမေးပွဲ ဖြေပြီးအချိန်က စသုံးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်သုံးခဲ့တာ (၆) နှစ်ကျော် (၇) နှစ် နီးပါး ရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် (၁၀) တန်းကျပြီး ကျောင်းထွက်လိုက်တယ်။
မေး။ ။ အဲဒီတုန်းကဆိုရင် ဆေးကို ဘယ်လိုစသုံးဖြစ်ခဲ့သလဲ၊ နောက် ဆေးကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဝယ်ခဲ့ပါသလဲ?
ဖြေ။ ။ အဲ့ဒီတုန်းက မူးယစ်ဆေးဝါးရှိတဲ့အကြောင်း ကြားတော့ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ပြောလာတယ်၊ အဲ့ ကနေ စမ်းသုံးကြည့်ချင်တာနဲ့ နောက်ပိုင်း စွဲသွားတယ်၊ အိမ်က အဖေအမေလည်း မသိအောင် ခိုးသုံးခဲ့တာပေါ့၊ ဆေးကိုကျတော့ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းကနေလည်း ရတယ်၊ အပြင်က မိတ်ဆွေတွေဆီကလည်း ဝယ်လို့ ရတယ်။
မေး။ ။ မောင်လေးသုံးခဲ့တဲ့ဆေးတွေက ဘာဆေးအမျိုးအစားလဲ၊ ပြီးတော့ တစ်နေ့ကို ဘယ်လောက်သုံး ဖြစ်လဲ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဆေးမှာ ရေးထားတာက တရားမဝင် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးလို့ ရေးထားတယ်၊ (WY) ပေါ့၊ ဒီဆေးတစ်မျိုးကိုပဲ သုံးခဲ့တယ်၊ ကျွန်တော်တစ်နေ့ကို ဘယ်လောက်သုံးမယ်လို့တော့ မရှိပါဘူး၊ ရှိသ လောက်ကို သုံးလိုက်တာပဲ၊ အများဆုံးသုံးဖူးတာက အလုံး (၂၀) လောက် တစ်ခါတည်း သုံးတယ်၊ တစ်လမှာ (၂၅) ရက်လောက် သုံးဖြစ်တယ်၊
မေး။ ။ တစ်လမှာ (၂၅) ရက်လောက် သုံးတယ်ဆိုတော့ ကျန်တဲ့မသုံးဖြစ်တဲ့ရက်က ဆေးဝယ်မရလို့လား၊ ဆေးမသုံးရရင် ကိုယ့်ရဲ့ဆေးစွဲနေတဲ့စိတ်ကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သလဲ?
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ဆေးဝယ်မရတာလဲ ပါတယ်၊ ဝယ်ရခက်လို့ပေါ့၊ မသုံးရရင် မနေနိုင်တော့ ပိုက်ဆံအိတ် ဘယ် နားမှာ ထားတာလဲ၊ ကိုယ့်အိမ်က ပိုက်ဆံကို ခိုးယူတာပေါ့ဗျာ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ပိုက်ဆံကို လိမ်တောင်းတယ်၊ ဆေးမသုံးရရင် အရက်ကိုပဲ များများသောက်ပေးနေရတယ်။
မေး။ ။ ဒီမူးယစ်ဆေးဖြတ်တဲ့ဌာနကို ရောက်ရှိလာအောင် ဘယ်လိုအဆက်အသွယ်ရခဲ့လဲ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တော့ အစအဆုံးမသိခဲ့ဘူး၊ အဖေကပဲ အားလုံးလုပ်ပေးတယ်၊ ဒီကိုမလာခင်က ရှင်း ရှင်းပြောရင် နည်းနည်းရူးနေပြီး၊ ဖိနပ်ချွတ်ပြီး လိုက်သွားနေတဲ့အဆင့် ရောက်နေပြီး၊ အဖေအမေတို့ကလည်း ကျွန်တော့်ကို ရွာသာကြီးပို့ဖို့ စီစဉ်နေတယ်၊ ကျွန်တော့်ကိုတော့ ရွာသာကြီးပို့မယ်လို့ မပြောပြခဲ့ဘူး၊ ရန် ကုန်သွားမယ်လို့ပဲ ပြောတယ်၊ ကျွန်တော်ကလည်း ရန်ကုန်ကို ဘာသွားလုပ်မလဲတောင် စဉ်းစားနေတယ်၊ ဒီ ရောက်ပြီးမှ ရွာသာကြီးပို့ စီစဉ်ခဲ့မှန်း သိခဲ့ရတယ်၊ အဲ့ဒီရွာသာကြီး မသွားခင်မှာပဲ အဖေက ဒီမော်လမြိုင်မှာ လည်း မူးယစ်ဆေးစွဲဖြတ်လိုသူအတွက် ကုသပေးတဲ့သတင်းကြားလို့ နောက်ပြီး ဒီကခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့လည်း သိ နေတော့ ဆက်သွယ်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ဒီကိုပို့ပေးလိုက်တယ်၊ ကျွန်တော်လည်း ဖြတ်ချင်လို့ လိုက်လာခဲ့တယ်။
မေး။ ။ ဒီကိုရောက်လာတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီးလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော် ရောက်လာတာ (၂) ပတ်လောက်ရှိပြီး၊ ဒီနေ့ဆို (စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့) ကျွန်တော် ဆင်းခွင့်ရရှိတော့မယ်။
မေး။ ။ ကိုယ့်အနာဂတ်အတွက် ရှေ့ဆက်ပြီး ဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးထားတာရှိလဲ?
ဖြေ။ ။ အရင်က မကောင်းခဲ့တာတွေကို မေ့ပစ်နိုင်အောင်ရယ်၊ အခုကိုယ့်အရွယ်ကလည်း စီးပွားရှာတဲ့ အရွယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ဘဝတက်လမ်းအတွက် ကောင်းမွန်လာအောင် ကြိုးစားသွားမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါ တယ်။
မေး။ ။ ဒီကနေ ဆင်းသွားရင် ဆေးစွဲတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို ဘယ်လိုကူညီတိုက်တွန်းပေးဖို့ စိတ်ကူးရှိပါသလဲ?
ဖြေ။ ။ သူတို့ပြောတဲ့စကားကို အရင်နားထောင်ကြည့်မယ်ပေါ့၊ ဒါကို ကိုယ်သုံးသင့်လား မသုံးသင့်လား အရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့၊ ဒါမျိုးတိုက်တွန်းပြောပေးမလို့ စဉ်းစားထားတယ်၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း မသုံး တော့ဘူးဆိုတော့ ဒီနေရာမှာ ကုသပေးနေပါတယ်၊ တကယ်မဖမ်းဆီးဘူးဆိုတာရယ်၊ လာကုသလိုက်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းသွားမှာပါ။
မှတ်ချက်- မွန်ပြည်နယ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးဖြတ်လိုသူများကို မဖမ်းဆီးသည့်အပြင် မော်လမြိုင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် မွန်ပြည်နယ် မူးယစ်ဆေးဝါး ဆန့်ကျင်ရေးအသင်းတို့ ပူးပေါင်းမှုဖြင့် ထောက်ပံ့ကြေးပါ ပေးဆောင်နေပါသည်။
ပိုင်နွန်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည်။ 2016-10-02
Tags ပိုင်နွန်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည်။
Previous မူးယစ်ဆေးစွဲကုသရေးဆေးရုံမြေ (၃) နေရာ မွန်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တင်ပြထား
Next MCL ဘိလပ်မြေစက်ရုံရှိ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား ၅ ဦးအား လဝက ဥပဒေဖြင့် တရားစွဲဆို